«Ligue des champions 2018»: hanafika an’i Salah sy i Mané i Mbappé sy i Neymar | NewsMada
«Ligue des champions 2018»: hanafika an’i Salah sy i Mané i Mbappé sy i Neymar
Hanomboka amin’ity anio talata ity, ny andro voalohany amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “ligue des champions”, taranja baolina kitra. Anisan’ny goavana, ny fifandonan’ny Liverpool sy ny PSG.
Hanamarika ny fanombohan’ny fifanintsanana isam-bondrona eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “ligue des champions”, taranja baolina kitra, amin’ity anio ity ny lalaon’ny Liverpool sy ny Paris St Germain. Hanafika an-dry zareo Anglisy, ao amin’ny kianja Anfield, ny Frantsay.
Heverin’ny rehetra fa hiendrika famaranana kely mihitsy ity lalao ity, na vao fifanintsanana aza. Hifampitady amin’ilay Senegaley, Sadio Mané sy ilay Egyptianina, Mohamed Salah, ao amin’ny kianjany eto i Mbappé sy i Neymar ary i Cavani. Raha tsiahivina, ao anatin’ny heriny tanteraka amin’izao fotoana izao, ny Liverpool izay tsy mbola tojo faharesena, teo amin’ny fifaninanana anglisy. Toy izany koa i Mané, manana ny tanjany eo amin’ny famonoam-baolina.
Ankoatra izay, mafy eo amin’ny fiarovan-tena ny Liverpool, raha ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Tsy mbola nidiram-baolina afa-tsy roa ihany hatreto. Na izany aza, manana olana i Jürgen Klopp, mpanazatra ny Liverpool, noho ny tsy fahafahan’i Firmino milalao noho ny ratra mahazo ny masony. Handringa izany ny fanafihana, amin’ity satria tsy misy afa-tsy i Mané sy i Salah, ny hany hanatanteraka izany.
Etsy ankilany, andrasan’ny rehetra ny fiverenan’i Neymar, tsy nisongadina loatra nandritra iny taom-pilalaovana lasa iny. Miandrandra mafy an’i Mbappé, mpilalao mendrika tamin’ny “Mondial 2018” ihany koa ny Frantsay rehetra, amin’ity.
-FC Barcelone # PSV Eindhoven
-Inter de Milan # Tottenham
-FC Bruges # Dortmund
-Schalke 04 # FC Porto
-AS Monaco # Atletico Madrid
-Etoile Rouge # Naples
-Galatasaray # Lokomotiv Moskou